Fa Maninona àry Aho no Nisy? | Fanontaniana ho An’Andriamanitra
Fanontaniana 1: Fa Maninona àry Aho no Nisy?
LEHIBE tany Angletera i Rosalind, ary tena tia nianatra. Te hanampy olona koa izy. Nahita asa tsara izy taorian’ny nahazoany diplaoma. Nanampy olona tsy manan-kialofana sy kilemaina ary votsa saina izy. Efa nanana ny ampy izy nefa mbola nieritreritra ihany nandritra ny taona maro hoe: “Mba inona re no antony ahavelomantsika e? Dia maninona isika no nisy?”
Misaina isika olombelona fa tsy toy ny biby. Mahay maka fianarana avy amin’ny zavatra lasa isika ary mahay mitsinjo ny hoavy. Afaka mieritreritra koa isika hoe inona no antony isiantsika.
Maro no mihevitra fa ny hitady vola na laza mba ho sambatra no tena antony mampisy antsika.
Isika ihany no mamaritra izay zava-dehibe eo amin’ny fiainantsika. Ny sitrapontsika aloha no tiantsika hatao vao ny sitrapon’Andriamanitra.
Nanan-karena be i Solomona Mpanjaka sady nanao izay rehetra nahafinaritra azy. Hitany anefa fa tsy nitondra nankaiza akory ireo. Nolazainy kosa hoe inona no tena mahasambatra. Hoy izy: “Izao no famaranan-teny rehefa re izany rehetra izany: Matahora an’Andriamanitra ka tandremo ny didiny, fa izany no adidy tokony hataon’ny olombelona.” (Mpitoriteny 12:13) Inona no tafiditra amin’ny hoe mitandrina ny didin’Andriamanitra?
Tian’Andriamanitra hankafy fiainana isika. Anisan’ny antony namoronany antsika izany. Hoy i Solomona: “Tsy misy mahasoa ny olona mihoatra noho ny mihinana, sy misotro, ary mifaly noho ny asa mafy ataony. Hitako koa fa avy amin’Andriamanitra izany.”—Mpitoriteny 2:24.
Tian’Andriamanitra ho tia sy hikarakara ny fianakaviantsika koa isika. Ireto misy torohevitra nomeny ho an’ny mpianakavy tsirairay:
‘Tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ny lehilahy.’—Efesianina 5:28.
Ho faly sy ho afa-po kokoa isika raha mankatò an’ireo toro lalan’ny Baiboly ireo. Misy zavatra faran’izay lehibe tokony hataontsika anefa. Mila mianatra momba an’ilay Mpamorona isika ary mifandray tsara aminy toy ny hoe Namana. Milaza mihitsy aza ny Jakoba 4:8 hoe: “Manatòna an’Andriamanitra, dia hanatona anareo izy.” Tena ho sambatra isika raha manao izany.
Mahafantatra ny antony mampisy azy izao i Rosalind, ilay noresahina teny am-piandohana. Tantarainy ao amin’ny pejy 10 ny nahatonga izany.
Inona no Nolazain’i Jesosy fa Antony Mampisy Antsika?
Fantatr’i Jesosy tsara ny antony nampisy azy tetỳ an-tany. Hoy izy: “Izao no nahaterahako, ary izao no nahatongavako ho amin’izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina.” (Jaona 18:37) Nampianatra ny olona ny marina momba an’Andriamanitra sy ny fikasany izy nandritra ny androm-piainany.
Hisy dikany ny fiainantsika raha manahaka an’i Jesosy isika. Nanasa antsika hanahaka azy mihitsy aza izy. (Matio 11:29) Ireto misy fomba roa azontsika anaovana izany:
Nilaza i Jesosy fa raha te ho sambatra isika, dia mila “mahatsapa fa mila an’Andriamanitra.” (Matio 5:3) Mahatsapa fa mila an’Andriamanitra isika raha te hahafantatra azy sy te hifandray aminy. Raha miezaka mianatra momba an’io “hany tena Andriamanitra” io sy ‘Jesosy Kristy, ilay nirahiny’, isika dia hahafantatra azy.—Jaona 17:3.
Nandidy ny mpanara-dia azy i Jesosy mba hampianatra ny hafa izay nianarany. Hoy izy: “Mandehana àry, ataovy mpianatra ny olona any amin’ny firenena rehetra, ka ataovy batisa amin’ny anaran’ny Ray sy amin’ny anaran’ny Zanaka ary amin’ny anaran’ny fanahy masina. Ampianaro izy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo.”—Matio 28:19, 20.
Mihatsara ny fiainan’ny olona iray rehefa mianatra Baiboly izy sady mampihatra izay ianarany. Rehefa mampianatra ny hafa momba an’Andriamanitra koa izy, dia vao mainka hiaiky fa misy dikany ny fiainany.